Taratasy manome endrika tsy manam-paharoa famantarana ny biby | Famoronana an-tserasera
Ny logo dia mety manana fahasahiranana lehibe amin'izany aglutinate ao ny sary an'ny orinasa na marika iray. Noho io antony io dia tsy mora ny mahita mpamorona izay mahay manazava tsara izay tadiavin'ny mpanjifa, ka ireo izay matihanina manana talenta lehibe dia mazàna no mandany vola be. Zava-dehibe ihany koa ny fahafantaran'ny mpanjifa izay tadiaviny, satria arakaraka ny maha-vaovao omena azy ireo no hahamora kokoa ny famoronana ilay sary famantarana izay tena maneho ny vokatra na ny marika.
Mpamorona sary indianina antsoina hoe Shibu PG mampiasa fikitika tena manokana raha te hanampy zavatra tena tany am-boalohany tamin'ny logo. Amin'ny teny iray dia voafaritra ny biby resahina ary avy amin'izany dia ampiasaina ny litera izay mamaritra ny endrika tsy manam-paharoa sy mampiavaka an'io biby io. Ny vokatra tratra dia tena manaitra tokoa araka ny ahitanao ireo ohatra samihafa zaraiko amin'ireto andalana ireto ary mety ho aingam-panahy ho an'ny logo hafa.
Shibi dia manova litera iray amin'ny teny hoe "omby" ho ampiasao ny u toa ny tandrony an'ilay biby tandindona. Fomba tena manokana hanasongadinana ny endrika ny biby izay ny sary famantarana dia tsy inona fa ny teny iray. Toy izany koa no azo afindra amin'ny endrika hafa toy ny olona malaza na zavamaniry manana endrika tsara izay azo faritana amin'ny taratasy iray.
Ka mazava koa izany mitana andraikitra lehibe ny loharano amin'ny famolavolana ny sary famantarana ny tenany mba hifanaraka amin'izany taratasy izay homenay endrika manokana sy izay misambotra ny dikan'ilay teny mihitsy.
Afaka mijanona ianao ny Behance anao hahalala ny asany. Raha tianao mpamorona hafa miaraka amina fikitihana be an'ireo logo mandalo anao ho an'ity fidirana ity hihaona amin'i Ji Lee, tsy ho diso fanantenana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Logo famantarana biby minimalista miaraka amin'ny endrik'izy ireo tokana
Patreon, ny sehatra fialokalofana ho an'ny artista